Lufthansa Pack FSX & P3D HOT
Faran'izay fonosana anisan'izany ny Boeing B737-500, B747-400, B747-800i sy ny Airbus A380-841 (rehetra amin'ny VC sy feo) ao amin'ny loko ny Lufthansa.
Ao amin'ny sokajy sokajy FSX/P3D safidio ny "Lufthansa Pack"
Deutsche Lufthansa AG (FWB: LHA, OTCQX: DLAKY) (fanononana Alemanina: [ˈdɔʏt͡ʃə ˈlʊfthanza]) no mpitatitra saina any Alemana ary zotram-piaramanidina lehibe indrindra any Eropa amin'ny mpandeha rehetra mitondra sy ny haben'ny andian-tsambo. Ny governemanta Alemanina dia nahazo tombony 35.68% tao Lufthansa hatramin'ny 1997, fa ny orinasa kosa dia tompon'ny mpampiasa vola tsy miankina (88.52%), MGL Gesellschaft für Luftverkehrswerte (10.05%), Deutsche Postbank (1.03%), ary Deutsche Bank (0.4%) ary manana mpiasa 37,042 (hatramin'ny martsa 2007). Ny anaran'ny orinasa dia nalaina avy tamin'i Luft (ny teny alemà nadika hoe "rivotra"), ary Hansa (taorian'ny ligin'i Hanseatic League, vondrona mpivarotra antonony lehibe).
Ny fiaramanidina no fahefatra eran-airline lehibe indrindra eo amin'ny ankapobeny nitondra mpandeha, miasa tolotra mba 18 toerana ao an-toerana sy iraisam-pirenena 203 78 toerana any amin'ny firenena manerana an'i Afrika, Amerika, Azia sy Eoropa. Rehefa miaraka amin 'ny mpiara-miasa, Lufthansa tolotra manodidina 410 toerana.  maherin'ny 710 fiaramanidina dia manana ny faharoa lehibe indrindra airline mpandeha sambo eo amin'izao tontolo izao rehefa miaraka ary koa ireo sampany.
Lufthansa ny voasoratra anarana birao sy ny orinasa foibeny any Deutz, Cologne, Alemaina, sy ny lehibe hetsika fototra (Lufthansa Aviation Center (LAC) sy ny Kilonga fifamoivoizana foiben'ny tany Francfort Airport ao Frankfurt am Main tamin'ny faharoa foiben'ny amin'ny Munich Airport. Ny ankamaroan'ny Lufthansa ny mpanamory , tany mpiasa, ary fiaramanidina mpanompony dia monina ao Frankfurt.
Lufthansa dia mpikambana mpanorina ny Star Alliance, ny lehibe indrindra eran-airline fanekena, niforona tao 1997. Ny Lufthansa Group 117,000 mampiasa olona eran-tany ny 146 firenena. Ao 2010, 90 tapitrisa mahery mpandeha nanidina tamin'i Lufthansa (tsy ao anatin'izany ny Germanwings sy Bruxelles Airlines). Source Wikipedia.
Video: Lufthansa amin'ny Polo91240 for Rikoooo.com
Downloads 83 527
Tetikasa Airbus & Project OpenSky & Skyspirit & Pack avy ricardo_tv